Nohazavaina ny Lalàna Heloka Bevava Emirà Arabo Mitambatra - Ahoana ny fomba hitaterana heloka bevava? | Orinasa Mpampanoa lalàna
Nohazavaina ny Lalàna Heloka Bevava Emirà Arabo Mitambatra - Ahoana ny fomba hitaterana heloka bevava?
Emirà Arabo Mitambatra - Toeram-pandraharahana malaza sy toerana fizahan-tany
Ankoatra ny maha iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra eran-tany, ny UAE dia toerana fandraharahana sy fizahan-tany malaza ihany koa. Vokatr'izany, ny firenena, ary indrindra i Dubai, dia tena ankafizin'ireo mpiasa mpila ravinahitra sy mpiala sasatra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Na dia tanàna tena azo antoka sy mahafinaritra aza i Dubai, dia ilaina ho an'ny mpitsidika vahiny ny mahatakatra ny Ny rafitra ara-dalàna ao UAE ary ny fomba hamaliana raha toa ka lasa a niharan’ny heloka.
Eto, ny UAE manana traikefa mpisolovava mpanao heloka bevava manazava ny zavatra andrasana amin'ny rafitra lalàna momba ny heloka bevava any UAE. Ity pejy ity dia manome topimaso momba ny fizotry ny lalàna momba ny heloka bevava, ao anatin'izany ny fomba fanaovana tatitra heloka bevava sy ny dingana amin'ny fitsarana heloka bevava.
Overview ny Rafitra lalàna momba ny heloka bevava UAE
Ny rafitry ny lalàna momba ny heloka bevava ao Emirà Arabo Mitambatra dia mifototra amin'ny ampahany amin'ny Sharia, vondron-dalàna voarindra avy amin'ny foto-kevitra Islamika. Ho fanampin'ny foto-kevitra Islamika, ny fizotry ny heloka bevava ao Dubai dia maka didy avy amin'ny Lalàna momba ny Heloka Bevava laharana faha-35 amin'ny 199. Ity lalàna ity dia mitarika ny fametrahana fitarainana momba ny heloka bevava, fanadihadiana momba ny heloka bevava, fizotry ny fitsarana, didim-pitsarana ary fiampangana.
Ny mpilalao lehibe tafiditra amin'ny fizotry ny heloka bevava ao UAE dia ny niharam-boina/mpitaraina, olona voampanga/voampanga, polisy, mpampanoa lalàna, ary ny fitsarana. Matetika dia manomboka ny fitsarana heloka bevava rehefa mametraka fitarainana momba ny voampanga any amin'ny paositry ny polisy eo an-toerana ilay niharam-boina. Andraikitry ny polisy ny manao famotorana momba ny heloka bevava, raha ny Fampanoavana no miampanga an’ilay voampanga eny amin’ny fitsarana.
Ny rafi-pitsarana UAE dia misy fitsarana lehibe telo:
Ny Fitsarana ambaratonga voalohany: Raha vao tafapetraka dia tonga eny amin’ity fitsarana ity ny raharaha heloka bevava rehetra. Ny fitsarana dia ahitana mpitsara tokana izay mihaino ny raharaha ary manome ny didim-pitsarana. Na izany aza, mpitsara telo no mandre sy mamaritra ny raharaha amin'ny fitsarana heloka bevava (izay mitondra sazy henjana). Tsy misy fahazoan-dàlana ho an'ny fitsarana mpitsara amin'izao dingana izao.
Ny Fitsarana Ambony: Aorian'ny famoahan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany ny didim-pitsarany dia azon'ny andaniny sy ankilany atao ny mametraka fitoriana any amin'ny Fitsarana Ambony. Marihina fa tsy ren’ity fitsarana ity intsony ny raharaha. Tsy maintsy hamaritana ihany raha nisy ny fahadisoana tamin’ny didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana ambany.
Ny Fitsarana Cassation: Izay olona tsy afa-po amin'ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Ambony dia afaka mampiakatra ny raharaha any amin'ny Fitsarana Cassation. Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia farany.
Fanasokajiana ny fandikan-dalàna sy ny heloka bevava ao amin'ny lalàna heloka bevava UAE
Alohan'ny hametrahana fitarainana momba ny heloka bevava dia ilaina ny mianatra ny karazana fandikan-dalàna sy heloka bevava eo ambanin'ny lalàna UAE. Misy karazana fandikan-dalàna telo lehibe sy ny saziny:
Fanitsakitsahana (Violations): Ity no sokajy faran'izay henjana indrindra na fandikan-dalàna madinidinika momba ny fandikan-dalàna UAE. Tafiditra ao anatin'izy ireo izay fihetsika na fandaozana izay mahasarika sazy na sazy tsy mihoatra ny 10 andro an-tranomaizina na onitra 1,000 dirham fara-fahakeliny.
Fanodinkodinana: Voasazy migadra, onitra 1,000 ka hatramin'ny 10,000 dirham raha be indrindra, na fandroahana. Mety hahasarika ihany koa ny fandikan-dalàna na ny sazy Diyyat, fandoavana “vola amin’ny ra” silamo.
Felonia: Ireo no heloka bevava faran'izay henjana indrindra eo ambanin'ny lalànan'ny Emira Arabo Mitambatra, ary sazy an-tranomaizina mandra-pahafaty, na fahafatesana, na Diyyat.
Moa ve azo aloa amin'ny niharam-boina ny lamandy ao amin'ny Fitsarana Heloka Bevava?
Tsia, aloa amin'ny governemanta ny onitra amin'ny fitsarana heloka bevava.
Ho lany ve ny fametrahana fitarainana eo anatrehan'ny polisy?
Tsy hisy ny fandaniana amin’ny fametrahana fitoriana any amin’ny mpitandro filaminana.
Mametraka fitarainana heloka bevava any UAE
Any Emira Arabo Mitambatra, azonao atao ny mametraka fitarainana momba ny heloka bevava amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tobin'ny polisy akaiky indrindra, eo akaikin'ny toerana niharan'ny heloka bevava. Na dia azonao atao aza ny manao ny fitarainana am-bava na an-tsoratra, dia tsy maintsy mametraka mazava tsara ny zava-nitranga izay mandrafitra ny heloka bevava. Aorian'ny fametrahanao ny fitarainanao dia horaketin'ny polisy ny dikan-teninao momba ny zava-nitranga tamin'ny teny Arabo, izay hosoniavinao avy eo.
Ankoatra ny fanaovana fanambarana am-bava na an-tsoratra, ny lalàna UAE dia mamela anao hiantso vavolombelona hanamarina ny tantaranao. Afaka manampy amin'ny fanomezana teny manodidina fanampiny na manome antoka ny filazanao ny vavolombelona. Izany dia mahatonga ny tantaranao ho azo inoana kokoa ary manome fanampiana sarobidy ho an'ny fanadihadiana manaraka.
Ny fanadihadiana momba ny heloka bevava dia ahitana fiezahana hanamarina ny lafiny amin'ny tantaranao sy hanaraha-maso ilay voarohirohy. Ny fandehan'ny fanadihadiana dia miankina amin'ny toetry ny fitarainanao sy ny masoivoho manana fahefana hanadihady ilay fitarainana. Ny sasany amin'ireo manampahefana mety handray anjara amin'ny fanadihadiana dia ahitana:
Manamboninahitra ara-dalàna avy amin'ny polisy
Mpanara-maso ny kaominina
Ao anatin’ny famotorana, ny tompon’andraikitra no hanao famotorana an’ilay voarohirohy ary handray ny fanambarany. Manan-jo hanome vavolombelona afaka manamarina ny dikan-ny zava-nitranga ihany koa izy ireo.
Mariho fa ny lalàna UAE dia tsy mitaky anao handoa sarany alohan'ny hametrahana fitarainana momba ny heloka bevava. Na izany aza, raha mila ny serivisy mpisolovava heloka bevava ianao, dia ho tompon'andraikitra amin'ny sarany matihanina.
Rahoviana no hanomboka ny fitsarana heloka bevava?
Manomboka ny fitsarana heloka bevava ao Emirà Arabo Mitambatra rehefa nanapa-kevitra ny hampiakatra ny fitsarana ilay voarohirohy ny mpampanoa lalàna. Misy dingana manokana anefa tsy maintsy hitranga alohan’ny hitrangan’izany.
Voalohany, raha nanao fanadihadiana mahafa-po ny polisy, dia hitondra ny raharaha any amin’ny Fampanoavana. Ny mpampanoa lalàna dia manana fahefana lehibe hananganana sy hampitsahatra ny raharaha heloka bevava any UAE, ka tsy afaka manohy ny dingana raha tsy misy ny fankatoavan'izy ireo.
Faharoa, ny Fampanoavana dia hanasa sy hanadihady mitokana ny mpitory sy ahiahiana mba hamantarana ny tantarany. Amin'ity dingana ity, ny roa tonta dia afaka mamoaka vavolombelona hanamarina ny kaontiny ary manampy ny Fampanoavana hamaritra raha ilaina ny fiampangana. Ny fanambarana amin'ity dingana ity dia atao na adika amin'ny teny arabo ary nosoniavin'ny roa tonta.
Aorian’io famotorana io dia ny Fampanoavana no hamaritra raha hampiakarina eny amin’ny fitsarana ilay voarohirohy. Raha mandray fanapahan-kevitra hiampangana ilay voarohirohy izy ireo, dia hiakatra fitsarana ny raharaha. Ny fiampangana dia amin'ny endrika antontan-taratasy milaza ny mombamomba ny fandikan-dalàna ary mampiantso ilay voarohirohy (antsoina hoe olona voampanga ankehitriny) mba hiseho eo anatrehan'ny Fitsarana ambaratonga voalohany. Fa raha manapa-kevitra ny Fampanoavana fa tsy misy fahamendrehana ny fitoriana dia mifarana eto ny raharaha.
Ahoana ny fomba hitaterana heloka bevava na fisoratana anarana tranga heloka bevava any UAE?
Raha iharan'ny heloka bevava ianao na mahafantatra heloka bevava atao, dia mety mila manao dingana manokana ianao mba hiarovana ny tenanao sy hahazoana antoka fa hampandrenesina ny manam-pahefana. Ity torolalana manaraka ity dia hanome anao fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka heloka bevava na fisoratana anarana tranga heloka bevava any Emirà Arabo Mitambatra (UAE).
Ahoana no hanombohana raharaha heloka bevava any UAE?
Raha nanapa-kevitra ny hanomboka raharaha heloka bevava amin'ny olon-kafa ianao, dia misy dingana maromaro tokony hataonao.
1) Manaova tatitra momba ny polisy - Ity no dingana voalohany amin'ny raharaha heloka bevava rehetra, ary tokony hifandray amin'ny biraon'ny polisy izay manana fahefana amin'ny faritra nitrangan'ny heloka bevava ianao. Raha te hanao tatitra amin'ny polisy ianao dia mila mameno tatitra nomanin'ny mpitsabo ankatoavin'ny fanjakana izay mirakitra ny ratra nateraky ny heloka bevava. Tokony hiezaka ihany koa ianao haka ny dika mitovy amin'ny tatitry ny polisy mifandraika amin'izany sy ny fanambaran'ny vavolombelona raha azo atao.
2) Manomana porofo - Ankoatra ny fanaovana tatitra amin'ny polisy, azonao atao koa ny manangona porofo manohana ny raharahanao. Ity dia mety ahitana, fa tsy voafetra amin'ireto manaraka ireto:
Izay antontan-taratasy fiantohana mifandraika
Lahatsary na sary porofo momba ny ratra vokatry ny heloka bevava. Raha azo atao, dia tsara ny maka sary ny ratra hita maso faran'izay haingana aorian'ny fisehoany. Ankoatra izany, ny vavolombelona dia azo ampiasaina ho loharano sarobidy amin'ny raharaha heloka bevava maro.
Firaketana ara-pitsaboana na faktiora mirakitra ny fitsaboana azo noho ny heloka bevava.
3) Mifandraisa amin'ny mpisolovava iray - Rehefa voaangonao ny porofo ilaina rehetra dia tokony hifandray amin'ny iray ianao mpisolovava mpiaro ny heloka bevava efa za-draharaha. Ny mpisolovava iray dia afaka manampy anao hivezivezy amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava ary manome torohevitra sy fanohanana sarobidy.
4) Mametraha fitoriana - Raha mankany amin'ny fitsarana ny raharaha, dia mila mametraka fitoriana ianao mba hanohizana ny fiampangana heloka bevava. Azo atao amin’ny alalan’ny fitsarana sivily izany.
Zava-dehibe ny mahatsiaro fa misy fetran'ny fotoana hametrahana raharaha heloka bevava any UAE, noho izany dia ilaina ny mifandray amin'ny mpisolovava faran'izay haingana raha manapa-kevitra ny hanao hetsika ara-dalàna ianao.
Ho afaka hitondra Vavolombelona ve ilay niharam-boina?
Mety hitondra vavolombelona hijoro vavolombelona eny amin’ny fitsarana ny olona iray niharan’ny heloka bevava raha toa ka miakatra fitsarana ny raharaha. Amin'ny ankapobeny, azon'ny mpitsara atao ny mampanantsoina ny olona tsirairay ary asaina manatrika fitsarana.
Raha misy porofo manan-danja hita taorian'ny nanombohan'ny fitsarana, dia mety ho azon'ny voampanga na ny mpisolovavany ny hangataka vavolombelona vaovao hijoro vavolombelona mandritra ny fotoam-pitsarana manaraka.
Inona avy ireo karazana heloka bevava azo taterina?
Ireto heloka bevava manaraka ireto dia azo taterina amin'ny polisy any UAE:
Raharaha mifandraika amin'ny fifamoivoizana
Fanitsakitsahana ny zava-mahadomelina
Izay heloka na asa hafa mandika ny lalàna
Ho an'ny tranga mifandray amin'ny fiarovana na fanorisorenana dia azo atao ny miantso mivantana ny polisy amin'ny alàlan'ny Aman Service-ny amin'ny 8002626 na amin'ny alàlan'ny SMS amin'ny 8002828. Tranonkala polisy Abu Dhabi na any amin'ny sampana rehetra ao amin'ny Departemantan'ny Fanadihadiana Heloka Bevava (CID) any Dubai.
Tsy maintsy mijoro ho vavolombelona ao amin'ny Fitsarana ve ny Vavolombelona fototra?
Tsy voatery hijoro vavolombelona eny amin’ny fitsarana ny vavolombelona fototra raha tsy tiany. Ny mpitsara dia mety hamela azy ireo hijoro ho vavolombelona amin'ny fahitalavitra mihidy raha matahotra ny hijoro ho vavolombelona mivantana. Laharam-pahamehana hatrany ny fiarovana ny niharam-boina, ary handray fepetra ny fitsarana mba hiarovana azy ireo amin’izay loza mety hitranga.
Dingan'ny fitsarana heloka be vava Emirà Arabo Mitambatra: Lalàna momba ny lalàna momba ny heloka bevava any UAE
Ny fitsarana heloka bevava any amin'ny fitsarana UAE dia atao amin'ny teny Arabo. Satria ny teny Arabo no fitenin'ny fitsarana, ny antontan-taratasy rehetra natolotra teo anatrehan'ny fitsarana dia tsy maintsy adika amin'ny teny Arabo ihany koa.
Ny fitsarana no mifehy tanteraka ny fitsarana heloka bevava ary hamaritra ny fandehan’ny fitsarana araka ny fahefany araka ny lalàna. Ity manaraka ity dia fanazavana fohy momba ny dingana manan-danja amin'ny fitsarana heloka bevava any Dubai:
Fitsarana: Manomboka ny fitsarana rehefa mamaky ny fiampangana ny voampanga ny fitsarana ary manontany ny fomba fiampangan'izy ireo. Mety hiaiky na mandà ny fiampangana ilay voampanga. Raha miaiky ny fiampangana izy ireo (ary amin'ny fandikan-dalàna mifanaraka amin'izany), ny fitsarana dia handalo ny dingana manaraka ary hivantana amin'ny didim-pitsarana. Raha mandà ny fiampangana ilay olona voampanga dia hitohy ny fitsarana.
Raharaha fanenjehana: Ny mpampanoa lalàna dia hanolotra ny raharahany amin'ny fanaovana fanambarana fanokafana, fiantsoana vavolombelona, ​​ary fanolorana porofo hanehoana ny heloky ny olona voampanga.
Raharaha voampanga: Aorian'ny fanenjehana, ny voampanga dia afaka miantso vavolombelona sy manome porofo amin'ny alalan'ny mpisolovavany ho fiarovan-tenany.
didim-pitsarana: Ny fitsarana no hanapa-kevitra momba ny heloky ny voampanga rehefa avy nihaino ny andaniny sy ny ankilany. Raha hitan’ny fitsarana fa meloka ilay voampanga, dia hiroso amin’ny fanasaziana ny fitsarana, izay hampiharan’ny fitsarana sazy. Fa raha manapa-kevitra ny fitsarana fa tsy nanao ny fandikan-dalàna ny voampanga, dia hanafaka ny voampanga amin'ny fiampangana, ary hifarana eto ny fitsarana.
didim-pitsarana: Ny toetry ny fandikan-dalàna no hamaritra ny hamafin'ny sazy atrehin'ireo voampanga. Ny fandikan-dalàna dia mitondra sazy maivana kokoa, raha ny heloka bevava kosa no hitondra ny sazy henjana indrindra.
antso: Raha toa ka tsy afa-po amin’ny didy navoakan’ny fitsarana ny mpampanoa lalàna na ny voampanga, dia afaka mampiakatra fitsarana ambony izy ireo. Na izany aza, tsy manan-jo hampiakatra ny raharaha ilay niharam-boina.
Ahoana raha any amin'ny firenena hafa ilay niharam-boina?
Raha tsy any UAE ilay niharam-boina, dia mety mbola hanome porofo hanohanana raharaha heloka bevava izy ireo. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny fihaonambe video, fametrahana an-tserasera, ary fomba fanangonana porofo hafa.
Raha te-hijanona tsy mitonona anarana ny niharam-boina iray, azo avela ve izany?
Raha manapa-kevitra ny tsy hitonona anarana ilay niharam-boina, dia azo atao izany amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Na izany aza, mety miankina amin'ny hoe mifandray amin'ny resaka fiarovana na fanorisorenana ilay raharaha.
Azo atao ve ny manenjika raharaha heloka bevava raha tsy hita ilay nahavanon-doza?
Eny, azo atao ny manenjika raharaha heloka bevava amin'ny tranga sasany, na dia tsy hita aza ilay nahavanon-doza. Eritrereto hoe nanangona porofo manamarina ny fomba nandratra azy ilay niharam-boina ary afaka manome antontan-taratasy mazava momba ny fotoana sy ny toerana nisehoan'ilay zava-nitranga. Amin’izay fotoana izay dia azo atao ny manenjika ny raharaha heloka bevava.
Ahoana no ahafahan'ny niharam-boina mitady fahavoazana?
Ireo niharam-boina dia afaka mitady onitra amin'ny alàlan'ny fitsarana sy fitoriana sivily napetraka ao UAE. Miovaova arakaraka ny tranga ny habetsaky ny tambin-karama sy ny fanonerana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fametrahana fitoriana sivily ho an'ny ratra manokana ianao, dia azonao atao ny manontany amin'ny mpisolovava ratra manokana ao UAE.
Aiza no ahafahan'ireo niharam-boina mitady fanampiana fanampiny?
Raha te hifandray amin'ny mpanome tolotra ianao, dia mety hanome vaovao sy fanohanana ireo fikambanana manampy ireo niharam-boina na sampan-draharaha tsy miankina amin'ny faritra misy anao. Anisan'izany ny:
Ivon-toeram-panohanana ny niharam-boina heloka bevava UAE
Victims of Crime International
Ambasady britanika Dubai
Fitondram-pitaterana federaly UAE (FTA)
Filankevitry ny fifamoivoizana federaly
Foiben'ny polisy ao Dubai - CID
Departemantan'ny Fiarovam-panjakana ao Abu Dhabi
Inona no mitranga rehefa manomboka ny raharaha heloka bevava?
Rehefa misy fitarainana dia alefan'ny polisy any amin'ny sampan-draharaha mifandraika amin'izany (sampana fitsaboana ara-pitsaboana, sampan-draharaha momba ny heloka bevava elektronika, sns.) mba hojerena.
Avy eo ny polisy dia hitondra ny fitarainana any amin'ny fampanoavana, izay hanendrena mpampanoa lalàna handinika izany araka ny voalazan'ny Code famaizana UAE.
Afaka omena onitra ve ny niharam-boina noho ny fotoana lany teo amin'ny fitsarana?
Tsia, tsy onitra amin'ny fotoana lany amin'ny fitsarana ireo niharam-boina. Na izany aza, mety haverina amin'ny dia sy fandaniana hafa izy ireo arakaraka ny raharahany.
Inona no anjara asan'ny porofo forensika amin'ny raharaha heloka bevava?
Ny porofo forensika dia matetika ampiasaina amin'ny raharaha heloka bevava mba hamaritana ny zava-misy amin'ny tranga iray. Mety ahitana porofo ADN, dian-tanana, porofo ballistic, ary karazana porofo ara-tsiansa hafa.
Afaka onitra ve ny niharam-boina noho ny fandaniana ara-pitsaboana?
Eny, azo omena onitra amin'ny fandaniana ara-pitsaboana ireo niharam-boina. Azon'ny governemanta atao ihany koa ny manonitra ireo niharam-boina tamin'ny saram-pitsaboana navoaka nandritra ny fanagadrana amin'ny tranga sasany.
Tsy maintsy manatrika ny fitsarana ve ny mpandika lalàna sy ny niharam-boina?
Samy tsy maintsy manatrika ny fotoam-pitsarana avokoa na ireo nandika lalàna na ireo niharam-boina. Ireo mpandika lalàna izay tsy tonga dia hotsaraina amin'ny tsy fahatongavana, raha toa kosa ny fitsarana dia afaka misafidy ny hanafoana ny fiampangana ireo niharam-boina izay tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana. Indraindray dia azo antsoina hijoro ho vavolombelona ho an'ny fampanoavana na ny mpiaro ny niharam-boina.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny niharam-boina dia mety tsy voatery hanatrika ny fitsarana.
Inona no andraikitry ny polisy amin'ny raharaha heloka bevava?
Avy eo ny polisy dia hitondra ny fitarainana any amin'ny fampanoavana, izay hanendrena mpampanoa lalàna handinika izany araka ny fehezan-dalàna famaizana UAE.
Hanadihady ny fitoriana ihany koa ny polisy ary hanangona porofo hanohanana ny raharaha. Azon'izy ireo atao koa ny misambotra sy mitazona ilay meloka.
Inona no andraikitry ny mpampanoa lalàna amin'ny raharaha heloka bevava?
Rehefa misy fitarainana alefa any amin’ny fampanoavana, dia hisy mpampanoa lalàna hanendrena azy handinika izany. Ny fampanoavana avy eo no hanapa-kevitra na hanenjika ny raharaha na tsia. Azon'izy ireo atao koa ny misafidy ny hanajanona ilay raharaha raha tsy ampy ny porofo manohana izany.
Hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana ihany koa ny mpampanoa lalàna amin’ny fanadihadiana ny fitarainana sy ny fanangonana porofo. Azon'izy ireo atao koa ny misambotra sy mitazona ilay meloka.
Inona no mitranga ao amin'ny fitsarana?
Rehefa voasambotra ilay nahavanon-doza dia hoentina eo anatrehan’ny fitsarana izy ireo mba hotsaraina. Ny mpampanoa lalàna dia hanolotra ny porofo eny amin'ny fitsarana, ary ny mpanao heloka dia mety manana mpisolovava hisolo tena azy ireo.
Mety hanatrika ny fitsarana ihany koa ilay niharam-boina ary azo antsoina hijoro ho vavolombelona. Mety hisolo tena an’ilay niharam-boina koa ny mpisolovava iray.
Ny mpitsara avy eo no hanapa-kevitra na hamotsotra ilay meloka na hitazona azy ireo am-ponja. Raha navotsotra ilay nandika lalàna, dia tsy maintsy manatrika ny fitsarana ho avy izy ireo. Raha tazonina am-ponja ilay nandika lalàna, ny mpitsara no hanambara ny sazy.
Ireo niharam-boina koa dia afaka mametraka raharaha sivily amin'ny mpandika lalàna.
Inona no mitranga raha tsy tonga eny amin'ny fitsarana ny mpandika lalàna iray?
Raha toa ka tsy tonga eny amin’ny fitsarana ny mpandika lalàna iray, dia afaka mamoaka didy fampisamborana azy ny mpitsara. Mety hotsaraina in absentia koa ilay nandika lalàna. Raha toa ka hita fa meloka ilay meloka, dia mety ho voaheloka higadra na sazy hafa.
Inona no andraikitry ny mpisolovava fiarovana amin'ny raharaha heloka bevava?
Ny mpisolovava mpiaro no tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny meloka eo amin'ny fitsarana. Azon'izy ireo atao ny manohitra ny porofo natolotry ny mpampanoa lalàna ary miady hevitra fa tokony havotsotra ilay mpandika lalàna na hahena ny sazy.
Ireto ny sasany amin'ireo andraikitry ny mpisolovava heloka bevava amin'ny raharaha heloka bevava:
Ny mpisolovava mpiaro dia afaka miteny amin'ny anaran'ny mpandika lalàna amin'ny fitsarana.
Raha miafara amin'ny fanamelohana ny raharaha, dia hiara-hiasa amin'ny voampanga ny mpisolovava mba hamaritana sazy sahaza sy hametraka toe-javatra manalefaka mba hampihenana ny fanamelohana.
Rehefa mifampiraharaha amin'ny fifampiraharahana amin'ny fampanoavana, ny mpisolovava mpiaro dia afaka manolotra tolo-kevitra amin'ny fampihenana ny sazy.
Ny mpisolovava mpiaro no misolo tena ny voampanga amin'ny fitsarana didim-pitsarana.
Avela hitady fanampiana ara-dalàna ve ireo niharam-boina?
Eny, afaka mitady fanampiana ara-dalàna amin'ny mpisolovava mandritra ny fitsarana heloka bevava ireo niharam-boina. Na izany aza, ny fijoroana vavolombelona nataon'ilay niharam-boina dia azo ampiasaina ho porofo manohitra ny voampanga mandritra ny fitsarana, ka mila mahafantatra izany ny mpisolovava azy.
Manao fiangaviana eo anatrehan'ny Fitsarana
Rehefa voampanga ho nanao heloka bevava ny olona iray, dia mety hiaiky ho meloka izy na tsia.
Raha miaiky ny helony ilay olona, ​​dia hotsarain’ny fitsarana araka ny porofo natolotra. Raha toa ka miaiky ny tsy meloka ilay olona, ​​dia hametra ny datin’ny fitsarana ny fitsarana, ary hahazo fahafahana vonjimaika ilay nandika lalàna. Ny mpisolovava mpiaro dia hiara-hiasa amin'ny mpampanoa lalàna mba hanangona porofo sy vavolombelona.
Ny mpandika lalàna dia omena fe-potoana ihany koa mba hanao fifanarahana fiampangana amin'ny fampanoavana. Azon'ny fitsarana atao avy eo ny daty hafa hanaovana fitsarana na hanaiky ny fifanarahana nataon'ny roa tonta.
Haharitra hafiriana ny fihainoana?
Miankina amin'ny hamafin'ny heloka bevava, ny fihainoana dia mety haharitra minitra vitsy ka hatramin'ny volana maromaro. Ho an'ny heloka bevava madinidinika izay mazava tsara ny porofo, dia mety haharitra andro maromaro vao vita ny fitsarana. Amin'ny lafiny iray, ny raharaha sarotra ahitana voampanga sy vavolombelona maro dia mety mitaky volana maromaro na taona maro mihitsy aza ny fitsarana alohan'ny hamaranana azy. Hisy ny fifampidinihana mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro eo ho eo raha mametraka memorandum amin'ny fomba ofisialy ny andaniny.
Inona no andraikitry ny mpisolovava ny niharam-boina amin'ny raharaha heloka bevava?
Ny mpandika lalàna iray dia mety ho voaheloka ary asaina mandoa onitra ho an'ilay niharam-boina amin'ny tranga sasany. Ny mpisolovavan'ilay niharam-boina dia hiara-hiasa amin'ny fitsarana mandritra ny fanasaziana na aoriana mba hanangonana porofo hamaritana raha manana fahaizana ara-bola hanonerana ilay niharam-boina ilay nahavanon-doza.
Ny mpisolovava an'ilay niharam-boina dia mety hisolo tena azy ireo amin'ny fitoriana sivily amin'ireo mpandika lalàna.
Raha voampanga ho nanao heloka bevava ianao, dia ilaina ny mitady tolotra mpisolovava heloka bevava. Ho afaka hanoro hevitra anao momba ny zonao izy ireo ary hisolo tena anao eo amin'ny fitsarana.
Raha tsy faly amin’ny didim-pitsarana ilay nandika lalàna, dia mety hametraka fitoriana any amin’ny fitsarana ambony izy ireo. Ny fitsarana ambony dia handinika ny porofo sy hihaino ny tohan-kevitry ny roa tonta alohan'ny hanapahana hevitra.
Omena 15 andro ny voampanga hanoherana ny didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Avo Voalohany ao amin’ny Fitsarana Ambony ary 30 andro hanaovana ny fampiakarana ny didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Ambony.
Ohatra iray amin'ny raharaha heloka bevava any UAE
Atolotray manokana ny raharaha heloka bevava momba ny fandikan-dalàna amin'ny fanalam-baraka eo ambanin'ny lalàna Emirà Arabo Mitambatra mba hanehoana ny fiasan'ny fizotry ny heloka bevava.
Fampahalalana momba ny raharaha
Ny raharaha heloka bevava noho ny fanendrikendrehana sy fanalam-baraka dia azo apetraka amin'ny olona iray araka ny Andininy faha-371 ka hatramin'ny faha-380 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Emirà Arabo Mitambatra (Lalàna Federaly laharana faha-3 amin'ny taona 1987) araka ny lalàna Emirà Arabo Mitambatra.
Araka ny Andininy faha-282 ka hatramin'ny faha-298 ao amin'ny Fehezan-dalàna sivily Emirà Arabo Mitambatra (Lalàna Federaly laharana faha-5 amin'ny 1985), dia mety hametraka fitakiana sivily ho an'ny onitra vokatry ny asa fanalam-baraka ny mpitaraina.
Azo eritreretina ny hitondrana fitoriana fanalam-baraka amin’olona nefa tsy nahazoana antoka voalohany ny fanamelohana ho heloka bevava, saingy malaza ho sarotra ny fametrahana ny fanalam-baraka sivily, ary ny fanamelohana heloka bevava dia hanome porofo mafonja hanoherana ny Mpampanoa izay hifototra amin’ny fitoriana.
Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, ireo mpitaraina amin'ny heloka bevava noho ny fanalam-baraka dia tsy voatery mampiseho fa niharan'ny fahavoazana ara-bola izy ireo.
Mba hametrahana fitakiana ara-dalàna ho an'ny fahavoazana dia tsy maintsy asehon'ilay Mpitaraina fa niteraka fatiantoka ara-bola ny fitondran-tena fanalam-baraka.
Amin'ity tranga ity, nahomby ny ekipan'ny lalàna nisolo tena ny orinasa iray (ny “Mpitalanjona”) tamin'ny fifanolanana fanalam-baraka tamin'ny iray tamin'ireo mpiasany taloha (ny “Mpiaro”) tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Nametraka fitarainana momba ny heloka bevava tany amin'ny polisin'i Dubai ny mpitory tamin'ny Febroary 2014, nilaza fa nanao fanalam-baraka sy fanalam-baraka momba ny Mpitory tamin'ny mailaka nalefan'ny mpitory, ny mpiasa ary ny vahoaka ny mpiasany taloha.
Natolotry ny polisy tany amin’ny fampanoavana mba hojerena.
Ny Fampanoavana dia nanapa-kevitra fa nisy heloka bevava natao araka ny andininy faha-1, 20, ary 42 ao amin'ny Lalàna momba ny heloka bevava an-tserasera UAE (Lalàna Federaly laharana faha-5 amin'ny 2012) ary nampiakatra ny raharaha tany amin'ny Fitsarana Heloka Bevava tamin'ny Martsa 2014.
Ny andininy faha-20 sy 42 ao amin'ny Lalàna momba ny heloka an-tserasera dia milaza fa izay olona manompa olon-kafa, anisan'izany ny filazana amin'ny antoko fahatelo tranga iray izay mety hampiharana sazy na fanambaniana ataon'ny olon-kafa amin'ny fampiasana fitaovana teknolojian'ny fampahalalam-baovao na tambajotram-baovao. , dia migadra sy onitra manomboka amin'ny AED 250,000 ka hatramin'ny 500,000 anisan'izany ny fandroahana.
Ny Fitsarana Ambaratonga voalohany momba ny heloka bevava dia nahita tamin'ny Jona 2014 fa nampiasa fitaovana elektronika (mailaka) ny Mpampanoa mba hanaovana fitakiana fanalam-baraka sy fanalam-baraka amin'ny Mpitory ary mety hahatonga ny Mpitory ho tsinontsinona ny teny manendrikendrika toy izany.
Namoaka didy ny Fitsarana mba handroahana an'ilay Mpampanohitra avy any Emirà Arabo Mitambatra ary handoa onitra 300,000 Ariary koa. Teo amin’ny raharaha sivily, nanome baiko ihany koa ny fitsarana ny amin’ny famerenan’ny mpitory ny vola.
Nampakarin’ilay Mpampanoa lalàna tany amin’ny Fitsarana Ambony ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambany. Nohamafisin’ny Fitsarana Ambony ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin’ny Septambra 2014.
Tamin'ny Oktobra 2014, nampiakatra ny didim-pitsarana tany amin'ny Fitsarana Cassation ilay voampanga, ary nilaza fa mifototra amin'ny fampiharana ny lalàna, tsy misy antony, ary nanimba ny zony. Nanambara ihany koa ilay Mpaminany fa nanao fanambarana tamim-pahatokiana izy ary tsy nikasa hanisy ratsy ny lazan’ny mpitory.
Nolavin'ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenany ny fiampangan'ny Mpampanoa ny fahamarinana sy ny fikasana tsara tamin'ny famoahana ny teny toy izany, ary nitazona ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Ambony.
Fisoloana ara-dalàna avy amin'ny fanadihadiana ataon'ny polisy ka hatrany amin'ny fitsarana
Izahay dia misolo tena ny mpanjifa amin'ny fitsarana na ny fitsarana
Ny faritra manome fanohanana ireo mpisolovava mpanao heloka bevava ao UAE dia mandritra ny fotoana fitsarana na fitsarana. Izy ireo dia ho mpanolotsaina ara-dalàna ho an'ny mpanjifany mandritra ny fitsarana ary hanampy azy ireo amin'ny fanomanana. Raha avelan'ny fitsarana, ny mpisolovava momba ny heloka bevava dia manontany vavolombelona, ​​manao fanambarana fanokafana, manolotra porofo ary manao fanadihadiana.
Na fandikan-dalàna kely na heloka lehibe ny fiampangana anao, dia mety ho sazy henjana ianao raha hita fa meloka. Ny sazy mety hitranga dia ny fanamelohana ho faty, fanagadrana mandra-pahafatiny, sazy an-tranomaizina voafaritra, fitazonana ara-pitsarana, onitra amin'ny fitsarana ary sazy. Ankoatra ireo voka-dratsy mety hitranga ireo, Lalàna momba ny heloka bevava UAE sarotra, ary a kinga Ny lalàna momba ny heloka bevava any Dubai dia mety ho ny fahasamihafana eo amin'ny fahalalahana sy ny fanagadrana na ny sazy ara-bola be sy ny tsy dia lehibe. Ianaro ny paikady hiarovana na ny fomba hiadiana amin'ny raharaha heloka bevava anao.
Mpitarika fantatra amin'ny sehatry ny lalàna momba ny heloka bevava any UAE izahay, manana fahalalana sy traikefa be dia be amin'ny fiatrehana ny raharaha heloka bevava sy ny fizotran'ny heloka bevava manerana an'i UAE. Miaraka amin'ny traikefanay sy ny fahalalanay momba ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, dia nahavita nanangana laza miavaka miaraka amin'ny mpanjifa lehibe izahay. Manampy ny olona any Emirà Arabo Mitambatra hiatrika fitsarana sy olana ara-dalàna any UAE izahay.
Na nohadihadiana ianao, na nosamborina, na voampanga ho nanao heloka bevava tany Emirà Arabo Mitambatra, dia tena ilaina ny manana mpisolovava izay mahafantatra ny lalàn'ny firenena. Ara-dalàna ny anao fifampidinihana aminay hanampy anay hahatakatra ny toe-javatra misy anao sy ny ahiahinao. Mifandraisa aminay handamina fivoriana.